Ifulethi elitofotofo kwi-Ultra-Center of Kishinev
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguSvetlana
Ifulethi elitsha, elipholileyo, langoku elinesilingi ephezulu yeemitha ezi-3.
Ime ngokugqibeleleyo kumbindi wembali wedolophu elikomkhulu ecaleni kweStefan cel Mare Avenue. Kukuhambo lwemizuzu emi-5 ukuya eCentral Square kunye neArch yayo yoloyiso, ukuzalwa kukaKristu Cathedral kunye neSakhiwo sePalamente.
Isikhululo seenqwelomoya saseChisinau kukuhamba ngemizuzu engama-20.
Ijikelezwe ziindawo zokutyela, iikhefi, iimyuziyam kunye neendawo ezibonwayo ibonelela ngesiseko esifanelekileyo sokuhlola isixeko.
Indawo yokuhlala kukuhamba ngemizuzu emi-3 ukuya kwiMarike ePhakathi apho unokuthenga khona iimveliso zasekhaya kunye nezangaphandle: inyama, intlanzi, iimveliso zobisi, iziqhamo, imifuno njalo njalo.
5.0 · Izimvo eziyi-60
Indawo efikelelekayo esembindini wesixeko esidlamkileyo esinendlela entle iStefan cel Mare, onokuthi uhambe ngayo iiyure (ebusuku intle kakhulu) ujonge izakhiwo zembali, iifestile zeevenkile kunye nokungena kwiikhefi ezipholileyo kunye neeresityu. Ukuba uthanda ukukhetha iimveliso zasekhaya kunye nezangaphandle, ngoko uya kuvuyiswa kukusondela kwimarike enkulu eChisinau. Ukuphila ubomi obutofotofo, sicinge ngobomi apha kweyona nkcukacha incinci. Konke okunokuba yimfuneko kukho.